अनौठो शिशु, जसलाई २५ वर्ष फ्रिजमा राखेर जन्माइयो
एजेन्सी । मानव शरिरमा भ्रुण सामान्यतः ९ महिनापछि बच्चाको रुपमा जन्म लिन्छ । तर अत्याधुनिक प्रविधिको सहायतामा वर्षौँसम्म ‘फ्रिज’ गरिराखेको भ्रुणलाई पनि शिशुको रुपमा जन्माउन सकिँदो रहेछ । विस्तृतमा...
एजेन्सी । दुई वर्ष अगाडि क्यानसरका कारण छोरा गुमाएकी एक आमाको कोशिसबाट उनलाई पुनर्जीवित गर्न सफल भएकी छिन् । भारतको पुणेमा बस्दै आइरहेकी शिक्षिका राजश्री पाटिलले एक सरोगेट
सबैभन्दा धनी गाउँ, जहाँका सबै मानिस हेलिकप्टरमा यात्रा गर्छन् !
चीनमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँका सबै मानिस हेलिकप्टरमा यात्रा गर्छन । गाउँमै भएको होटलको सुइटमा सुतेको प्रतिरातको ११ देखी १३ हजार अमेरिकी डलरसम्म तिर्छन् । आर्थिक हिसाबले विश्वकै
यी शहर, जहाँका नागरिकले कर तिर्नुपर्दैन !
यहाँका नागरिकले महिनामा कति कमाउँछन् भनेर सरकारले चासो दिदैन । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका कामदारबाट समेत सरकारले कर अथवा अन्य कुनै पनि सुविधा लिंदैन । कामदारले कमाएको स
संसारकै दुर्लभ कुखुरा, जसको मूल्य २ लाख रुपैँया पर्छ
एजेन्सी । जनावरहरु पनि यस्ता हुन्छन् जसले पूरै दनियाँको मानिसलाई आश्चर्यमा पारिरहेका हुन्छन् । कुनै जनावरलाई भगवान्को रुपमा पूजा गर्ने गरिन्छ । अलग – अलग रुप र रङ्गमा जनावरहरुको प्रजाति पनि फरक पाइन्छ ।
यस्तो विषयको पनि विश्वविद्यालय
तपाईले अलग अलग विश्वविद्यालयका बारेमा त सुन्नुभएको छ होला तर कहिल्यै पोर्न विश्वविद्यालयका बारेमा सुन्नुभएको छ ?
जहाँ महिलाको योनीलाई पूजा गरिन्छ
काठमाडौं । विश्वमा विभिन्न शक्तिपिठहरु छन् । जहाँ मानिसहरु विभिन्न इच्छा र मनोकामना पुरा हुने उद्देश्यका साथ पूजापाठ गर्छन् ।